Goatemalà : Ilay Mpanao Jadona Teo Aloha Efrain Rios Montt Nohadihadiana Manokana Mikasika Ny Famonoana Ny Mpiray Tanindrazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2012 3:24 GMT
Vakio amin'ny teny Português, русский, Ελληνικά, Italiano, Dansk, Español, English
Ireo mafana fo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona dia manahy fa ny fandresen'ilay jeneraly teo aloha Otto Perez Molina tamin'ny fifidianana ho filoha dia midika ho fihemorana eo amin'ny fitsarana ao Guatemala. Kanefa, tamin'ity herinandro ity, hetsika goavana roa no nampiseho fa ny demokrasia izay goragora ao Guatemala dia efa mihamatotra.
Ny 26 Janoary, ny Kaongresy ao Goatemala dia nanao sonia ny “the Rome Statute of the International Criminal Court“, na ny Fifanarahan'ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena natao tany Roma, izay ahafahan'ny tribonaly iraisam-pirenena manenjika ireo mpanao tsinonontsinona ny zon'olombelona, raha tsy mahavita manao izany ny ao Goatemala; io andro io ihany, taorian'ny taona maro nialokalofany tao anatin'ny tsimatimanota avy amin'ny parlemantera, ilay filoha “de facto” teo aloha, Efraín Rios Montt, dia nohadihadiana tamin'ny mety ho maha-voarohirohy azy amin'ilay famonoana mpiray foko 1700 avy ao Maya ny taona 1982–1983, nandritra ny ady sivily enina ambiny telompolo taona tao Goatemala (1960-1996).
Ankizy lahy nijoro teo anoloan'ireo anaran'ireo olona niharan'ny vono. Sary avy amin'ny Renata Avila nahazoana alalana 2.0 Générique(CC BY 2.0) Creative Commons license.
Tao amin'ilay bilaogy SALTLaw, tao aminà lahatsoratra mitondra ny lohanteny hoe “Andro miposaka ho an'ny rariny ao Guatemala,” Raquel Aldana dia nanoratra ny lanjan'ny fiatrehan'i Rios Montt ilay fitsarana mikasika ny famonoana ny mpiray tanindrazana sy ny herisetra atao amin'ny olombelona :
Androany dia andro manan-tantara ho an'ny Goatemala. Ora vitsivitsy izay, taorian'ny andro lava nanaovana fanadihadiana, tribonaly iray ao Goatemala no nanokatra raharaha ara-pitsarana mikasika ny famonoana ireo mpiray tanindrazana anenjehana ilay Jeneraly misotro ronono Efraín Ríos Montt ary nandidy ny hitànana azy am-ponja. 85 taona ankehitriny, ilay jeneraly misotro ronono dia maintsy hiatrika fitsarana, izy dia voampanga ho tomponandraikitra tamin'ny famonoana an-jatony, izay nahatonga ny tahan'ny faty olona ho an'arivony, iraika ambiny fitopolo sy fitonjato ireo niharam-boina. Ríos Montt, izay hatramin'izao nahazo fiarovana tsimatimanota taorian'ny efa ho roapolo taona naha-mpikambana ny tenany tao amin'ny kaongresy ao Goatemala, ny naha filoha de facto azy nandritra ny 17 volana feno herisetra tamin'ilay ady sivily nandritra ny 36 taona, teo anelanelan'ny 1982 sy ny 1983.
Nanohy nitatitra momba ny fisehoan'i Rios Montt teo alohan'ny tribonaly izy :
Rehefa nanontaniana izy androany hoe fantany ve ny vesatra iampangana azy, Ríos Montt dia nilaza teo amin'ny micro hoe “Fantatro tsara mihitsy.” Avy eo, raha tokony ho fanambaràna am-panajàna ny amin'ny hoe meloka na tsia no nataony, dia naleony nangina. Taty ivelan'ny fitsarana androany, ireo mponina teratany ao Goatemala dia nametraka felan-draozy mena mivaky hoe tsy misy intsony ny tsimatimanota. Amin'izany, ny kaongresy ao Goatemala dia nanao sonia ilay “Fifanarahan'ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena natao tany Roma.
Ao amin'ny bilaogin'ny Filankevitry ny Raharaham-Bahiny, Natalie Kitroeff dia mametraka ny fiarovan-tenan'i Rios Montt.
Nataon'i Ríos Montt nazava tsara ny fiarovan-tenany. Hatramin'ny volana lasa teo, nilaza imbetsaka izy fa tsy afaka ny ho tsaraina ny amin'izao fanitsakitsahana ny zon'olombelona rehetra izao satria izy dia tsy tomponandraikitra tamin'ireo miaramila teny an-tanin'ady amin'ny maha-mpitarika ara-politikan'ny firenena. Ny mpiaro azy dia nanamafy izany filazana izany, nilaza tamin'ny filazam-baovao vao tsy ela izay,“Tena azonay antoka fa tsy misy ampahan'andraikiny amin'izany, satria tsy teny an-tanin'ady izy.”
Nanohy nanazava toy izao izy :
Io paika io dia fomba iray vaovao mifanaraka amin'ny zava-misy ao Goatemala. Mandraka androany aloha, ny miaramila dia nandà tanteraka ny hoe nisy famonoana mpiray tanindrazana tao anatin'ilay ady sivily iny. Na dia ilay filoha amin'izao fotoana izao aza, Otto Pérez Molina, dia nilaza fa tsy mino ny filazan'ny komisionan'ny fahamarinana ao amin'ny ONU izy, ary hoe afaka mitondra “porofo izy fa [ilay famonoana ny mpiray tanindrazana] dia tsy nisy,” nandritra ilay ady. Fa i Ríos Montt kosa ankehitriny dia milaza fa tsy hoe tsy nisy akory ny zava-doza niseho, fa izy kosa dia tsy meloka.
Na dia mbola tsy tonga tany amin'ny fanekena ampahibemaso ny famonoana ny mpiray tanindrazana aza izany, maneho izany fa efa niova ny zava-drehetra (kely fotsiny) nanomboka tamin'ny nitondran'ilay “Association for Justice and Reconciliation (AJR)” Fikambanana Ho amin'ny Rariny sy ny Fampihavanana, nitondra voalohany ny fiampangàna an'i Ríos Montt tamin'ny taona 1999. Ny fahitàn'ny Forensic Anthropology Foundation of Guatemala (FAFG) ny fasana faobe sy ny asa mafy ataon'ireo fikambanan'ny niharan-doza amin'ny fanosehana ny fitsarana – ary farany, ny nandreseny tamin'ny fanamelohana miaramila teo aloha miisa efatra tamin'ity taona ity – dia nahatonga ny miaramila handà ho tsy namono ny mpiray tanindrazana tsotra izao, farafaharatsiny eo anoloan'ny fitsarana.
""Tadiavina. I Mejia Victores sy Rios Mont noho ny famononana ny mpiray tanindrazana." Graffiti tao an-tananan'i Goatemala. Sary avy amin'ny The Advocacy Project eo ambany Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0) Creative Commons license
Tao amin'ny bilaogin'ny Lawyers, Guns and Money, na “Mpisolovava, Basy ary Vola”, i Erik Loomis dia mijery ny dikan'ilay fitsarana an'i Rios Montt ho an'ny mponina ao Guatemala ankehitriny :
Ankehitriny i Goatemala dia miatrika vanim-potoana vaovaon'ny tsy fahamarinan-toerana noho ny fihanak'ireo mpanondrana zava-mahadomelina avy ao Meksika sy El Salvador mankany amin'ny firenen'izy ireo, ary indrisy ny fanakanana mety tsara an'ireo làlan'ny zava-mahadomelina mankany Etazonia. Na dia telopolo taona lasa aza izay, ny mponina dia nanao izay tsy iarahana amin'ireo hery polisy noho ny famoretan'izy ireo mahery vaika, ankehitriny ireo mponina dia mametraka indray ny fahatokisany amin'ny polisy ho toy ny zavatra tokana afaka hiatrika ny andian-kerisetra vaovao mamely. Ny fanerena an'i Ríos Montt mba hiatrika ny fitsarana noho ny heloka nataony dia tsy hamaha na dia ny iray amin'ireo olana goavana ao Goatemala aza, kanefa mety farafaharatsiny, hanery ireo mpandàla ny herisetra eto amin'ny firenena mba hieritreritra tsara alohan'ny anaovan'izy ireo zavatra.
Mike, tao amin'ny Central American Politics, na “Politika Afovoan'i Amerika”, dia nanambara fa i Rios Montt dia nahazo fahafahana vonjimaika ary hijanona ho ambany fanaraha-maso any an-tranony mandritra ny fitsarana. I Mike dia nanampy ny heviny toy izao :
Fandresena miezinezina ho an'ireo mponina ao Goatemala ary tohin'ny zavatra ninoako ho taona miavaka mahafinaritra-miampy ny fandrosoan'ny zon'olombelona eto amin'ny faritra.
Ireo tranga roa ireo dia mampiseho fa, na dia tsy mitodika mijery ny lasa sy ny zava-doza nitranga nandritra ny ady sivily teo amin'ny firenena aza i Goatemala dia mikatsaka izay hahalasa azy ho firenena iray hanaja ny zon'olombelona voafaritry ny iraisam-pirenena sy hampihatra izany eo aminy. Ny tsy fanelanelanan'ny Filoha Otto Perez Molina, Jeneralin'ny tafika teo aloha, tamin'ilay raharaha ary ny fanohanany ny fanaovana sonia ny “Fifanarahan'i Rôma ” dia nanome fanantenana ny mponina ao Goatemala fa amin'ny hoavy dia mba ho vita aloha ny fitsarana, alohan'ny hahafatesan'ireo mpamono olona, na haha-antitra be loatra na hampaharary be loatra azy ireo vao hiatrika fitsarana.